रोचक Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - सुन्दै अचम्म लाग्ने परम्परा : ६४ बोका मान्छेको दाँतले टोकेर मार्ने प्रचलन
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । डोटीको एक गाउँपालिकामा एक व्यक्तिले बाघले जस्तै गरेर ६४ वटासम्म बोका दाँतले टोक्ने परम्परा विद्यमान छ । त्यसलाई स्थानीयले दैवीशक्ति र परम्पराका रूपमा लिने गरेका छन् । प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा यसरी बोकाको बलि चढाए गाउँमा जङ्गली जनावर, भूतप्रेत, बाढीपहिरोले दुःख नदिने र मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ । डोटीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आदर्श गाउँपालिका–६ सिगरीचौकामा जिउँदा ६४ वटासम्म बोका हरेक तीन÷तीन वर्षमा दाँतले टोकेर मार्ने परम्परा छ ।	थप पढ्नुहोस्
चिच्याएर बर माग्दा ३ लाख नगद संकलन !
बेझाड । पाल्पाको तिनाहुँ गाउँपालिका–४ मा अवस्थित सत्यवती मन्दिरमा लागेको चिच्याएर बर माग्ने मेलामा रु ३ लाख बराबरको भेटी सङ्कलन भएको छ । पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, स्याङ्जालगायतका विभिन्न जिल्ला तथा भारतको लखनऊदेखिका दर्शनार्थीले मेला अवलोकन गरेको धु्रवप्रसाद पङ्गेनीले जानकारी दिए । सत्यवती मन्दिरमा रहेकी बज्यै बैरी छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेकाले यहाँ आउने दर्शनार्थीले चिच्याएर बर माग्ने गर्दछन् । मन्दिर र ताल वरपर परिक्रमा गर्दै चिच्याएर बर मागेमा भाकल पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासका कारण पूजा गर्न आउने दर्शनार्थीले चिच्याएर बर माग्ने चलन छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । नेपाल संवत् ११३९ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस संवत्लाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रुपमा मनाउने गरेका छन् । राष्टिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विसं ९३७ इसं ८८० मा गरीब जनताको ऋणमोचन गरी नेपाल संवत्को शुरुवात गराएका थिए । नेपाल संवत्ले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय संवत्को मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा त्रिरत्न मानन्धरले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
‘सिस्नुपानीको देउसी भैलो’ : ठूला नेतालाई झटारो !
काठमाडौँ । दिपावलीको उपलक्ष्यमा विगत वर्ष झै यसपाली पनि ‘प्रज्ञा सिस्नुपानी देउसी’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र सिस्नुपानी नेपालले संयुक्तरूपमा प्रज्ञा भवनमा आयोजित देउसीको अवसरमा सामाजिक विकृति, राजनीति र भ्रष्टाचारविरूद्ध व्यङ्ग्यात्मक ‘प्रज्ञा–सिस्नुपानी देउसी’ प्रस्तुत गरिएको हो । कार्यक्रममा देउसीसँगै साङ्गीतिक प्रस्तुतिसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
गोरखामा नयाँ राजा, पहिरिए श्रीपेच
दीपक श्रेष्ठ गोरखा । नवौँ लिगलिगे दौड प्रतियोगिता ‘२०७५’ को उपाधि जित्दै भारतीय सेनाका अनिष थापामगरले श्रीपेच पहिरिएका छन् । पर्वत घर भएका थापा मगरले उपाधि जित्दै यस वर्षका लागि लिगलिगे राजा घोषित भएका हुन्। लिगलिगे दौड प्रतियोगितामा थापामगरले १३.८ किलोमिटरको निर्धारित दूरी ५८ मिनेट २५ सेकेण्डमा पार गरेका हुन् । प्रतियोगितामा बाग्लुङ जिल्ला घर भएका भारतीय सेनामा कार्यरत तीर्थ पुनः मगर दोस्रो भएका छन् । उनले निर्धारित दूरी ५८ मिनेट ४० सेकेण्डमा पूरा गरे ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । भारतको बिहारमा मुसाले रक्सी पिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । घटना बिहारको कैमूर जिल्लाको हो । जिल्लामा रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि बजारमा भेटिएको रक्सी बरामद गरिएको थियो । बरामद गरी नष्ट गर्न भनेर राखिएको रक्सी मुसाले खाएको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् । कैमूरको एउटा गोदाममा सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म जफत गरिएको रक्सी राखिएको थियो । सोमबार जफत गरिएको रक्सी नष्ट गर्ने कार्यक्रम थियो । नष्ट गर्ने बेलामा जब हिसाबकिताब भयो १० हजार रुपैयाँको अन्तर पाइयो । त्यसपछि मात्रै थाहा भयो कि १० हजार बराबरको रक्सी मुसाले पिएका रहेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । डब्लुडब्लुईका लोकप्रिय रेसलर रिक फ्लेयरले पाँचौ विवाह गरेका छन् । रिकले आफ्नी गर्लफ्रेन्ड वेन्डी बारलोसँग एक विशेष समारोहबीच विवाह गरेका हुन् । उक्त अवसरमा डब्लुडब्लुईसँग सम्बन्धित रेसरलहरूको सहभागिता थियो । ६९ वर्षीय रिक तथा टेनिस खेलाडी ५८ वर्षीया वेन्डी करिब ६ वर्षदेखि साथै थिए । गत वर्षको अगस्टमा रिक मुटुको समस्याका कारण गम्भीर बिरामी हुँदा वेन्डीले नै उनको हेरचाह गरेकी थिइन् । रिकले विवाहको भिडियो समेत इन्स्टाग्राम स्टोरीमा राखेका छन्, जसमा सेतो कोट लगाएका रिक हातमा फूल लिएर बेहुली वेन्डीतर्फ अघि बढिरहेका देखिन्छन् ।	थप पढ्नुहोस्
तपाईलाई थाहा छ ? कुकुर हास्छ !
काठमाडौं । के तपाईलाई थाहा छ कुकुर हास्ने पनि गर्छ । सुन्दा अनौठो लाग्ला तर यो सत्य हो । इन डिफ़ेंस ऑफ़ डॉग्स र एनिमल्स अमंग असले कुकुर कहिले र किन हास्छ भनेर गरिएको अध्ययनले पत्ता लागेको हो । मानिसहरुको सबैभन्दा प्यारो र प्रिय साथी भनेकै कुकुर हो । तपाइको घरमा पनि कुकुर छ होला तपाई त्यसलाई कति माया गर्नुहुन्छ रु उसले पनि तपाईलाई त्यतिकै माया गर्छ । कुकुर हास्ने केही कारण तपाइलाई जानकारी दिदै छौ : १. भिडियो कुकुरले आफ्नो तस्विर देखेपछि पहिला त ध्यान दिएर हेर्छ अनि उक्त तस्विरलाई भिडियोमा देखेपछि कुकुर हास्ने गर्छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । डडेल्धुरालगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा आज बूढी पोल्ने पर्व मनाइँदैछ । असोज सङ्क्रान्तिका दिन राक्षस पुतनालाई भगवान श्रीकृष्णले मारेको उत्सवका रुपमा यो पर्व मनाइने गरिन्छ । विजय उत्सवका रुपमा मनाइने यो पर्वमा बूढी अर्थात राक्षसी पुतनाको प्रतीकलाई पोल्ने गरिन्छ । किम्बदन्तीअनुसार भगवान श्रीकृष्णले राक्षसी प्रवृतिकी पुतनालाई मारेपछि उनका साथी ग्वाला अर्थात गोठालाले पुतनाको शव दहन गरेको पण्डित कृष्णदत्त ओझाले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विमान परिचारिकाका रूपमा कार्यरत एक ३६ वर्षीया महिलाले आफ्नो कुमारित्व लिलाम गरेकी छिन् । जर्मनीकी म्यान्डीले सिन्ड्रेला एस्कोर्टमार्फत् आफ्नो कुमारित्व ३ करोड २० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न सफलता पाएकी हुन् । म्युनिखका एक व्यापारीले खरिद गरेको जनाएपनि ति ब्यापारीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । गायनमा पनि रुचि भएकी म्याण्डीले उचित पुरुष पाए आफ्नो कुमारित्व बिक्री गर्ने सोच रहेको बताएकी थिइन् । महिलाले आफ्नो कुमारित्व एक पटक मात्र भंग गर्न पाउने हुनाले आफूले केही रकमका लागि त्यसको सदुपयोग गरेको उनले बताइन् ।	थप पढ्नुहोस्
दश किलोग्राम चरेश सहित एक जना पक्राउ ...
अञ्चल अस्पतालको सेवा लथालिङ्ग ...
जाउलाखेललाई हराउँदै थ्रिस्टार लिगको ...
बजेट १० लाखको, ठेक्का करोडको ...